Isboseta - Wikipedia
3.2 Mpanjakan'i Jodà
Araka ny Baiboly hebreo dia izao avy ny anarana azo iantsoana an'i Isboseta, iray amin'ny zanaka lahy efatr'i Saoly:
אִֽישְׁבֹּשֶׁת‬ / Ishboshet na Eshboshet izay midika hoe "lehilahin'ny fahafaham-baraka".
אֶשְׁבַּעַל‬ / Eshbaal na Ashbaal izay midika hoe "misy i Baala" na "lehilahin'i Baala" na "lehilahin'nyTompo".
Ny hoe Baala dia anaran'ny andriamanitry ny Semita sy ny Kananita ary ny Fenisiana (na Foinikiana).
Ao amin'ny Boky faharoan'i Samoela no ahitana ny tantaran'i Isbaala (2Sam. 2.8–4.12). Zanak'i Saoly tamin'i Akinoama zanakavavin'i Ahimaaza izy sady teraka tamin'ny taona 1047 tal J.K.
Taorian'ny nahafatesan'i Saoly sy ireo zany lahy telo, dia i Jonatana sy i Abinadaba ary i Malkisoa, tamin'ny ady teo amin'ny Tendrombohitra Gilboa, dia i Isboseta, izay efapolo taona tamin'izay, no sisa velona ka nasandratr'i Abnera mpitari-tafik'i Saoly, ho mpanjaka tao Mahanaima. I Davida zanak'i Jese anefa efa nambara ho mpanjakan'ny fokon'i Jodà (2Sam. 2.4). Tsy nanjaka afa-tsy roa taona (2Sam. 2.11) i Isboseta sady tsy nanapaka afa-tsy ny foko 11n'i Israely ihany. Ireto ireo foko ireo: ny fokon'i Robena, ny fokon'i Simeona, ny fokon'i Isakara, ny fokon'i Zabolona, ny fokon'i Dana, ny fokon'i Naftaly, ny fokon'i Gada, ny fokon'i Asera, ny fokon'i Manase ary ny fokon'i Efraima.
I Davida sy i Isboseta dia niady matretika ka ny tafik'i Davida no naharesy (2Sam. 3.1), nefa niova hevitra i Abnera ka nikambana tamin'i Davida taorian'ny adin'i Abnera tamin'i Isboseta (2Sam. 3.8-12). Navelan'i Isboseta ho vadin'i Davida ihany ilay anabaviny (i Mikala) izay tokony homen'i Saoly ho vadin'i Davida talohan'ny fifanolanany (2Sam. 3.14-15).
Notapahan'ny manamboninahitra roa tao aminy (i Rekaba sy Baana) ny lohan'i Isboseta natory antoandro (2Sam. 4.5) ho valifatin'i Davida amin'ny tranon'i Saoly. Nefa nohelohin'i Davida ho faty izy ireo noho izany vonoan'olona izany. Nalevina tao amin'ny fasan'i Abnera tao Hebrona i Isboseta (2Sam. 4.12).
Saoly - Isboseta - Davida - Solomona (na Salômôna) - Jeroboama I -Nadaba - Baasa (na Basa) - Ela - Zimry - Omry - Ahaba (na Akaba) -Ahazia (na Okoziasa) - Jorama - Jeho - Joahaza (na Joakaza) - Joasy (na Joasa) - Jeroboama II - Zakaria - Saloma - Menahema - Pekahia (na Faseia) - Peka (na Fasea) - Hosea(na Osea).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Isboseta&oldid=973973"
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2019 amin'ny 10:36 ity pejy ity.